“Waanu naqaan jihada dilka gaystay, sababtuna waxay ahayd aannaysi qabiil” Gud. Gobolka Nugaal. – Radio Daljir
Garoowe, April 06 – Guddoomiyhaa gobolka Nugaal ayaa sheegay in dilkii Maxamed Yasinn ciise ilkacase maanta loogu gaystay magaalada Garoowe uu ahaa mid salka ku haya aano qabiil, isla markaana ay laamahaa ammaanku xilligan wadaan howlgallo iyo baaritaano la xirira dhacdadan.
Guddoomiye Cabdi Xirsi Qarjab oo goor dhawayd waraysi gaar ah siiyay Daljir ayaa sheegay in hay’adaha ammaanku ay si fiican u garanayaan, tirada iyo magacyada dhagar-qabayaasha gaystay dilkan isla markaana ay ciidamada ammaanku ay baaritaano ballaaran ka wadaan gudaha iyo bannaanka magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland.
Maanta 12-kii duhurnimo ayay rag hubaysani waxa ay afaafka hore ee xarunta gobolka Nugaal ku weerareen gaarigii uu watay Maxamed Yaasiin ciise ‘Ilkacase’ iyaga oo halkaa ku dilay isaga iyo ilaaladiisii gaarka ahayd. Guddoomiyaha gobolka ayaa sidoo kale xaqiijiyay tirada rasmiga ah ee dhimashada isaga oo sheegay in ay dhimashadu ku siman tahay labadaa marxuum oo kaliya. Si kastaba ha ahaatee, sida guddoomiyuhu xaqiijiyay, waxa jira laba kale oo dhaawac ah oo ay ku jirto qof dumar ah oo ay xaaladdeedu aad u liidato. Gabadhaas ayaa la sheegay in uu aqalkeedii ugu galay gaarigii uu watay marxuum Ilkacase kadib markii ay rasaastu haleeshay.
Magaalada Garoowe ayaa haatan waxa ka socda aaska dadka maanta lagu laayay Garoowe.